Maxaad kala socotaa saameynta iyo dhibka sarifka lacagaha qalaad uu ku hayo dhaqaalaha Somalia? - Caasimada Online
Home Maqaalo Maxaad kala socotaa saameynta iyo dhibka sarifka lacagaha qalaad uu ku hayo...
Maxaad kala socotaa saameynta iyo dhibka sarifka lacagaha qalaad uu ku hayo dhaqaalaha Somalia?
Sida aynu wada ognahay Soomaalliya waa wadan dhibaata badani ay ka taagneed oo 21 sanadood dil, dhac iyo boob lagu soo jiray, laakiin hada waxaa moodaa ifafaalaha rajada dowlada cusub iney muuqdaan ilaaheyna waxaan uga baryeynaa in towfiiqda waafajiyo.
Hadii aan usii daadago gunta maqaalka waxey tahay xagee dowladu wax kabilowdaa? Ileen maanta dhaqaale ahaan, dhisma ahaan, aqoon ahaan iyo technology ahaanba wadanka aad ayuu uliitaa inkasto ay is dhaamaan oo ay waxbarashada roontahay marka kuwa kale loo bar bardhigo.
Meelaha uu wadanka aad uga liita waxaa kamid ah in doollarka mareekanka ($) wax lagu kala iibsado iyadoo aanu ognahay in wadanka Soomaalliya lacagtiisu tahay shilin (sh.so) waliba intaa kaliya maahane in doolarka isticmaalkiisu uu badanyahay oo maanta wax waliba dollar lagu kala iibsado sida in wadanka lacagtiisu ay tahay doolar oo kale dadkana aay aad ula dhacsanyihiin maadaama uu doolarka ka fuduyahay lacagta shilin Soomaalliga ,laakin wali dadkeena kuma baraarugsana saameyn intee la’eg ayuu doolarka kuleeyay wadankeena.
Sidaan hada ognahay waqtigan hada lajoogo doolarka waa uu qiima dhacay marka loo barbardhigo lacata shilin Soomaalliga marka maxaa sabab u ah?
Marka laga hadlaayo dhaqaalaha waxaa jira wax loo yaqaan demand & supply of money (baahida lacagta loo qabo iyo inta laheli karo) marka waqtigan hada lajoogo dollar supply (lacagta doolarka laheli karo) ayaa aaad ugu badan wadanka markaa waxey dhalisay demand of shilin (baahida shilling soomaliga) loo qabo in ay aad u badato iyadana laakin dowlada lacag meysan soo daabicin sidaa darteeda waxaa dhacday in doolarka uu qiima dhaco maadaama lacatii lagu sarifi lahaa ay aad ugu yartahay wadanka. Waayo sidaan ognahay doolar xad dhaaf ayaa soo gala wadanka sida lacagaha deeqaha, burcad badeeda, iyo mushaaraadkaa labixiyo intaba waa wada doolar, dowlada 20 sana kahor ayaa ugu dambeesay lacag lala bar bar dhigi karo lacagta shisheeye ee wadanka taallo oo la daabaco oo intaa ka dambeeyay wax sidaa u tira badan lama dabicin sidaa darted ayey lacagtii doolarka aheyd ku qiima dhacday tan shilin somaligana qaali ku noqotay.
Dollar ka markuu dhacay yuu saameeyay?
Dabcan wuxuu saameeyay bulshaweynta ku dhaqan wadankeena hooyo Soomaalliya, waayo dhibaatada ina heysata ayaa waxeytahay lacag aan lacagteena aheyn ayaan isticmaalnaa oo maanta waxaaba la dhihi karaa in lacagteena dhabta ah ay noqotay “dollar”- ka, taana waxaa daliil u ah in ganacsiga wadanka gudihiisa ah wax lagu kala iibsado dollar-ka dhan waliba ha ahaateee, marka ay noqoto xaga mushaar bixinta xitaa lacagta dollar-ka ayaan isticmaalnaa, sidaa darteed marba hadii hoos u dhaca dollar ka uu saameeyn ku leeyahay nolosha wadanka waxey ka dhigantahay in dollar lacagteena ugu weyntahay ee maanta dalka laga isticmaalo.
Sida caadiga ah ayaa waxeytahay in wadan waliba lacag gaar ah uu leeyahay oo lacag aan lacagtiisa aheyn wadnka gudihiisa waxba looga iibsan karin oo ay sharci daro ay tahay qofkana uu ku muteysan karo xarig illaa in uu jiro heshiis laba dowladood iyo in kabadan ay saxiixdeen iney wax ku kala iibsan karaan mooyee, sida kale waa sharci daro marka si loola socdo loona kontoroolo is badalada ku imaan kara lacagta wadanka waa in laga joojiyaa isticmaalka bulashada ay isticmaaleyso lacagaha qalaad wax lagu kala iibsanaayoo, sitoos ahna loowada isticmaalo lacagta shilin somaaliga ah.
Exchange rate (heerka sarifka)
Marka ay noqoto in la qeexo “exchange rate” ayaa waxaa lagu qeexaa inuu yahay heer ka sarifka u dhaxeeya laba lacagood oo kala wadan ah. Wadan walibana waxaa uu xooga saraa sida uu ku xasilin lahaa lacagtiisa ama ay mid xasiloon ahaato si wadanka dhaqaalihiisa loo kobciyo, si bulshadana nolol fiican u hesho. Qiima dhaca dollarka wuxuu sababay in shilin somaliga uu qiima yeesho waxeyna aheyd in ay noqoto mid lagu farxo maadama lacagtii wadanka ay qaali noqotay laakin nasiib darro waxey noqotay mid gaajo iyo sicir barar cusub umada u horseeday waayo magaca ayey ka tahay lacagteena laakiin marka nolosha dhabta ah loo laabto lacagteena waa mida saameyn ku yeelata dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo maciishada umada Soomaalliyeed taasina waa lacagta dollar ka ee maahan shilin Soomaalliga. Meelaha uu sarifka saameyn karo ayaa waxaa kamid ah foreign direct investment (maalgalinta shisheeye ee tooska ah), exports and imports (soodhoofin iyo siidhoofin), foreign labors (shaqaalaha dibada) iyo life expenses (maciishada) iyo kuwa kaloo lamid ah halkaan lagu soo koobi karin, oo aan kaga hadli doono qoraaladayda soo socda.
Lasoco qeybta labaad iyo todobaadka dambe insha allah
Qore: Liiban Mohamed Mursal (Moha Gaas).
Fadlan waxii talo iyo tusaale ah waxaad kusoo hagaajin kartaa: